Khaatumo Oo Heshiis Midnimo La Saxeexatay Somaliland
Khaatumo Oo Heshiis Midnimo La Saxeexatay Dawladda Somaliland
Caynaba (Dhamays) – Magaalada Caynaba ee xarunta gobolka saraar waxa maanta lagu soo gabo-gabeeyay wadahadaladii u socday dawladda somaliland iyo khaatumo, wada-hadalladaasi oo socday labadii sanno ee u danbeeyay taasi oo ka dhalatay gogoshii nabadeed ee Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland u fidiyay dadka deegaanada Sool, Sanaag bari iyo Buuhoodle.
Wadahadaladani oo labadii sano ee u danbeeyay uga socday dalalka imaaraadka, jabuuti, itoobiya iyo Somaliland gudaheeda ayaa maanta ku soo gaba-gaboobay Caynaba.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo hogaamiyaha khaatumo Prof Cali Khaliif Galaydh oo si wada jira u saxeexay heshiiska ay gaadheen labada dhinac, sidaana waxa lagu sheegay War Qoraal ah oo Madaxtooyada Somaliland soo gaadhsiisay Warbaahinta.
Qoraalkaasi ayaa lagu sheegay in saxeexa Heshiisku dhacay ka dib, Hoggaamiyaha Khaatumo Cali Khaliif Galaydh oo hadal ka jeediyey Madasha Heshiisku ka dhacay uu sheegay inuu ku faraxsan yahay heshiiska maanta lagu kala saxeexday Caynaba, waxa uu sheegay Galaydh in dastuurka Somaliland oo la furaa yahay dawladda kaliya ee reer Sool, iyo Sanaag bari isagoo ballan qaaday inuu heshiiskaasi sida uu yahay uu u fulin doono.
Shirkaasi muhiimka ah ee ay Somaliland iyo Khaatumo ku kala saxeexdeen magaalada Caynaba galabta 20/20/2017, ayaa Qodobbadii ka soo baxay waxa Saxaafadda u akhriyey Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibedda Somaliland Dr. Sacad Cali Shire, waxaanu yidhi “Waxa weeyi nuxurku :-
In ciidamada hubaysan ee Khaatumo la qarameeyo oo waddanku yeesho ciidan qaran oo suga xuduudihiisa, jirintaankiisa iyo danahiisa.”
Madaxweynaha Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) oo gebogabadii halkaa ka soo jeediyey Khudbad dheer ayaa yidhi “Madaxda-dhaqanka, Madaxda Khaatumo, Madaxda Dawladda, Madaxda Xisbiyada Qaranka iyo Marti-sharafta kale, ee madashan fadhida, dhammaantiin, waxaan idiin soo gudbinayaa salaan Xambaarsan Nabadgelyo iyo Naxariis Eebe “Asalaamu Calaykum Wa Raxmatullaahi Wa Barakaatuhu”
Mudanayaal iyo Marwooyin, Milgo iyo Maamuus weyn bay ii tahay, in aan maanta ka soo qayb-galo munaasibaddan taariikhiga ah, ee lagu soo af-jarayo, khilaafkii dheeraa ee u dhexeeyey Somaliland iyo Khaatumo. Sharaf weyn bay ii tahay, Madaxweyne ahaan, in aan maanta ku guulaysanno, xal u helidda khilaafkaa, dhaawaca ku ahaa midnimada iyo wada-jirka Umada Somaliland. Dhinaca kale, waa Eebe Mahaddii, in aanu, aniga iyo saaxiibkay Prof. Cali Khaliif Galaydh, oo aanu wadaagno, sooyaal taariikheed oo dheer, aanu bogsiinnay boogihii iyo nabaradii labada dhinac, isla markaana aanu maanta isku mabda iyo mawqif siyaasadeed nahay.
Mudanayaal iyo Marwooyin, Xal-u-helidda khilaafka ina soo dhex-galay, wuxuu ahaa mas’uuliyad umad ahaan ina saaran, si gaar ahna, wuxuu ahaa xil noo saaran labadayada Oday, ee jaalka ah. Tan iyo intii, Qarankan Jamhuuriyadda Somaliland, dib loo yag-leelay, waxa jiray tabashooyin iyo saluug, ay tirsanayeen beelaha deegaanada Gobolka Sool, Xaysimo, Buuhoodle iyo Sanaag Bari. Nasiib darro, ma dhicin in si rasmi ah, marnaba khilaafaadkaa, loogu xalliyo hab-dhaqan ama mid siyaasadeed toona.
Mudanayaal iyo Marwooyin, Waxaan soo dhaweynayaa, midnimada iyo heshiiska maanta aanu kala saxeexanayno, maamulka iyo madaxda khaatumo, kaasoo Shacbiga Somaliland u hor-seedaya; Horumar, iskaashi iyo isku-duubni. Waxaannu fulin doonaa heshiiskan, ka kooban Saddex iyo Tobanka Qodob, isla markaana, waxa waajib ku ah, hogaamiyaha i bedeli doona, dhaqan-gelinta go’aamada heshiiskani uu xambaarsan yahay.
Mudanayaal iyo Marwooyin, Si loo xaqiijiyo, isla markaana loo xoojiyo Midnimada Shacbi-weynaha Somaliland: Waxaan aamin-sanahay, in la qayb-sado, hawsha, halabadda iyo hantida Qarankan, Curdinka ah. Waxaan aamin-sanahay, in Beelaha iyo Bulshada Somaliland yihiin, kuwo siman oo leh xaq, xuquuq iyo xurmo isku mid ah. Waxaan aamin-sanahay, in cadaaladdu tahay, waxa keliya ee ay umadi ku walaaloobi karto, ama jiritaankeedu uu ku waari karo.
Walaalayaal, Waxaan gar u arkaa, in ay jid iyo daw tahay, in dhib iyo dheef la wadaago. Waxaan gar u arkaa, in wixii qal-damay la saxo. Waxaan gar u arkaa, in la dheeli tiro awood qaybsiga talada dalka. Waxaan gar u arkaa, in la idinka tiro, tabashada iyo turxaan kasta oo aad tirsanaysaan. Waxaan xal u arkaa, in loo baahan-yahay in dib u eegis lagu sameeyo, Saami-qaybsiga Kuraasta Baarlamaanka Jamhuuriyadda Somaliland, uu yeelan doono, mustaqbalka. Walaalayaal, mar labaad ayaan ku celinayaa, oo waxaan leeyahay, ma nihin, dad kala tagi kara, mana nihin dad kala tashan kara, ee waxaynu nahay dad isku dan, iyo isku dal ah. Waxaynu nahay, dad ka dhigan Sakaaradii la yidhi “Laba Tun, oo la kala qalo ma leh”.
Mudanayaal iyo Marwooyin, Waxaan kula dardaarmayaa, Bulshada Somaliland in ay wada-tashadaan, oo isku-tashadaan, isla markaana ay adkeeyaan nabada, midnimada, kalsoonida iyo is-aaminka dhexdooda. Ugu dambayn, waxaan hambalyeynayaa, Xubnaha Guddidii Wada-hadalka, laba geesoodka ahayd, ee ka kala socotay Jamhuuriyadda Somaliland iyo Khaatumo, kuwaas oo bud-dhig u ah guushan. Sidoo kale, waxaan bogaadinayaa, Dr. Cali Khaliif Galaydh, oo muujiyey geesinimo iyo go’aan adayg, si uu u mideeyo dadka iyo dalka Somaliland”.
Previous: “Wixii Hore Wax Ka Liita Inaad Doorato Lama Ogola..” Sheekh Aadan-Siiro
Next: Wasiir Samsam: Daadihisada Xoolaha Ummaddu Waxay Baal-Dahab Ah Ka Geli Doontaa Taariikhda Somaliland